ဟန်ဂေရီနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး ဟန်ဂေရီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများဟန်ဂေရီရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်းသည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှစ်ခု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်နေထိုင်မှု , ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ passp ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနေထိုင်နိုင်ငံနှင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဟန်ဂေရီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဟန်ဂေရီတွင်ဒုတိယရွှေဗီ၊ ဟန်ဂေရီတွင်ဒုတိယရွှေဗီသည်၊ ဟန်ဂေရီတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဟန်ဂေရီတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဟန်ဂေရီတွင်ရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ဟန်ဂေရီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဟန်ဂေရီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ဟန်ဂေရီတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 200,000
ဟန်ဂေရီသည် ၉၃၀၂၈ ကီလိုမီတာအကျယ်ရှိသောဥရောပဗဟိုမှကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံ ၇ ခုနှင့်မြောက်ဘက်မှလက်ယာရစ် - ဆလိုဗက်ကီးယား၊ ယူကရိန်း၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဆားဘီးယား၊
ဟန်ဂေရီသည်မြောက်ဘက်မှတောင်သို့စီးဆင်းသောဒန်ညူမြစ်ဖြင့်ပိုင်းခြားထားသည်။ သိသာထင်ရှားသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာနေရာသုံးခုရှိသည်။ Great Hungarian Plain (သို့) Alfold သည်ဒူဘိုင်း၏အရှေ့ဘက်သို့ ဦး တည်သည်၊ Transdanubia၊ ရေလမ်း၏အနောက်ဘက်သို့ဆုတ်ယုတ်နေသောareaရိယာနှင့်မြောက်ဘက်စောင်းများ။ အမြင့်ဆုံးနေရာသည် Matra တောင်တန်းများရှိ Kekes (1,014m) ဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအောက်ခြေသည်တောင်ဘက်ရှိ Szeged (၇၇ မီတာ) နှင့်နီးသည်။
ဟန်ဂေရီဟာပွင့်လင်းတဲ့စီးပွားရေးရှိပြီး၊ ကျွမ်းတဝင်မရှိသောတိုက်ရိုက်ထင်မြင်ချက်များသည်နှောင်းပိုင်းတွင်ပြောင်းလဲနေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ဟန်ဂေရီတွင်အကျွမ်းတဝင်မရှိဆုံးသောအကြီးမားဆုံးဈေးကစားသူမှာဂျာမနီ၊ သြစတြီးယား၊ နယ်သာလန်နှင့်အမေရိကန်တို့ဖြစ်သည်။
၃၃% ဟာဟန်ဂေရီစက်မှုလုပ်ငန်းများ Budapest တွင်တည်ရှိသည်။ ဘူဒါပက်စ်၏လက်လီရောင်းဝယ်မှုunfရိယာသည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောချည်နှောင်ထားသောကုန်တိုက်များနှင့်စတိုးဆိုင်များစွာရှိသည်။ ဟန်ဂေရီသည်ဆူဇူကီးနှင့် Audi ကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများစွာ၏နေရာဖြစ်သည်။
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပြီးအသက် ၁၅ နှစ်မှ ၆၄ နှစ်အတွင်းရှိတစ် ဦး ချင်းစီ၏ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ အသုံးပြုသူ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသားများဖြစ်ပြီး ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ တိုးချဲ့ကာလများ၌အလုပ်လုပ်သောကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်မှာ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်များစွာနိမ့်ကျသည်။ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းသောအလုပ်သမားများသည်တိုးချဲ့ကာလများဖြစ်သည်။
ဘ ၀ ၏နည်းလမ်းများသည်အီးယူတွင်အများဆုံးလျှော့ချထားသည်
ဂျီဒီပီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဟန်ဂေရီသည်အီးယူ၏ ၂၈ နိုင်ငံအနက် ၂၃ နိုင်ငံတွင် ၂၃ နေရာ၌ရှိနေပြီး ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်အီးယူ၏ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟန်ဂေရီ၏စွမ်းရည်ကိုနှစ်ဆထုတ်လုပ်သောသြစတြီးယားရှိareaရိယာအတွက် ဦး ဆောင်အနေအထားတွင်။ စျေးဝယ်သူအစိုးရ၏အမှန်တကယ်တစ် ဦး ချင်းစားသုံးမှု (AIC) ၏အစိုးရ၏ကူညီမှုကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အခြားတိုင်းတာမှုတစ်ခုကဟန်ဂေရီကိုဒုတိယနှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဟန်ဂေရီအစိုးရသည် ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နီးပါးပျက်စီးနေသောပြည်သူအများစုကိုကျောထောက်နောက်ခံပေးခဲ့သည်။ အဲဒီမတိုင်ခင်တရာထောင်ဂဏန်းလောက်ကဟန်ဂေရီလူမျိုးတွေဟာတည်းခိုစရာနေရာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ Habitat for Humanity အစီရင်ခံစာ၏ဖော်ပြချက်အရလူအများစု ၁၀၀၀,၀၀၀ သည်ဟန်ဂေရီလူမျိုးများအားချွတ်ယွင်းနေသောအိမ်ခေါင်မိုးများနှင့်ထပ်မံပုပ်နေသောအကွဲများနှင့်နေထိုင်ခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၄၄.၆ ရာခိုင်နှုန်းသောလူ ဦး ရေ၏အောက်တွင်သာအထုပ်အပိုးများဖြင့်နေထိုင်ကြပြီးဟန်ဂေရီလူမျိုး၏ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများ၌နေထိုင်ခြင်းမရှိသောမြုံမြောင်းတစ်ခုသို့ချဉ်းကပ်ကြသည်။
ဟန်ဂေရီတွင်ယေဘုယျဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသော်လည်း၊
ဟန်ဂေရီသည် ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ဆေးဝါးကုသမှုတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပါဝင်မှုရှိခဲ့သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ပါဝင်မှု၏သဘောသဘာဝအရအီးယူ၏အခြေခံတွင်တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ အများစုမှာလုပ်ခလစာနည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်သူများသည်ဟန်ဂေရီတွင်အခြားအီးယူနိုင်ငံများမှငွေများများများရနိုင်မည်ဟုမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ အဓိကပြissueနာမှာဆေးခန်းများ၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုကိုကုသပေးခြင်းထက်အခြားဆေးခန်းများ၌အဟန့်အတားဖြစ်စေရန်အာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ မှစတင်၍ ဟန်ဂေရီသည် ၂၀၀၉-၁၀ ဘဏ္monetaryာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေမှအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူလာသည့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (FDI) ၏လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၄.၃ ဘီလီယံ ၀ င်ငွေရှိသည်။ အများအားဖြင့်ဟန်ဂေရီသည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအကျိုးတူလုပ်ငန်းအတွက်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအခြေအနေများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောဘဏ္specialistsာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အကူအညီမဲ့သောပစ္စည်းများနှင့်အစားအစာပြင်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းများမှပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့လျှော့ချခြင်း၊ လက်လီရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်ကားပြင်ဆင်ခြင်းများသို့ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့် optional ကိုညွှန်ကြားချက်စစ်သားစုဆောင်းရေးနှုန်းထားများမြင့်မားသည်
မူလတန်းကျောင်းခွဲများအတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကွဲပြားမှုများစွာရှိခဲ့သော်လည်း ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနေဖြင့်ရှိနေသည်။ အမြင့်ဆုံးအဖြစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ခေါ်ယူမှု ၉၇.၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အနည်းဆုံး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၉၅.၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။ ကျောင်းရှိလူငယ်များအတွက်တိုင်းတာမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်။ လက်ခံနိုင်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကျောင်းမှဆယ်ကျော်သက်များအနက်အနည်းငယ်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးယေဘုယျအားဖြင့် ၅ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။
Tertiary Training သည်အကျိုးတူလိုအပ်သည်
ရေရှည်အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်သာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းသာလေးနှစ်သက်တမ်းရှိသည်။ ထိုလူ ဦး ရေ၏ ၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဘွဲ့ဒီဂရီသို့မဟုတ်တူညီကြသည်။ ဒီတိုင်းတာမှုတွေကနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီဂရီရှိတဲ့လူတွေဟာဆုတွေရနေတယ်။ လေ့လာမှုများအရအထက်တန်းကျောင်းအဆင့်အရည်အချင်းများသည်ဟန်ဂေရီတွင်အမြတ်နှစ်ဆဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ လေးနှစ်ကောလိပ်ပညာရေးသည်လစာရထားသောပရီမီယံ ၇၂ ရာနှုန်းနှင့်ထိုက်တန်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်အထက်သည်နိုင်ငံ၏တစ် ဦး ချင်းနစ်နာကြေးထက် ၁၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုဝယ်ယူနိုင်သည်။
NGO HE Innovate မှအရင်းအမြစ်များကိုအဆင့်မြင့်ပညာရေးသို့ထည့်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ပြည်နယ်မှအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုများလျော့နည်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှု၏အဓိကအချက်မှာဟန်ဂေရီ၏အနီးစပ်ဆုံးနှင့်အများပြည်သူအဆင့်ရှိငွေကြေးနှင့်လူမှုရေးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ဟန်ဂေရီ၏သင်ကြားပို့ချမှုမူဘောင်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်ပညာရှင်များအကြားရန်ပုံငွေနှင့်စတင်တည်ထောင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပြီးပြည်တွင်းဖြစ်ခိုင်မာသည့်ဘဏ္financialာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖြစ်စေသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်သူ၏နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်အရဟန်ဂေရီ ၀ န်ကြီးချုပ်ဗစ်တာအရမ်ဘန်သည်အစိုးရသတင်းများအားအဆင်ပြေစေမည့်လူအမြောက်အများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလူသိရှင်ကြားပေါင်းစပ်ခြင်းအဖြစ်ပေါင်းစပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများသည်အချို့သူများကကောင်းစွာအောင်မြင်ခဲ့သည် - Orban သည်ဟန်ဂေရီ၏မက်ထရိုပိုလစ်တန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်နေထိုင်သောလူများထံမှသူသည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏တောတောင်ထူထပ်သောဒေသများမှလူများထံမှသူတို့၏အကူအညီကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားသည်။
ဟန်ဂေရီ၏မြိတ်၏အစိတ်အပိုင်းသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အပြင်ဘက်ခြမ်းကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ထိုနိုင်ငံသည်ယခင်ကခရီးသည်အမြောက်အများရရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မကြာသေးမီကဟန်ဂေရီသည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခက်ခဲသောအနေအထားကိုရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှအမိုးအကာရှာဖွေသူအရေအတွက်ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။
ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဟန်ဂေရီ
နိုင်ငံသားအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် (၅ နှစ်သက်တမ်းရှိသည်)
ဟန်ဂေရီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန် processing
၈ နှစ်ကြာပြီးနောက် (နိုင်ငံသားပြုခွင့်နှစ်မျိုး)
ယူရို -nominated ဟန်ဂေရီဘဏ္asာရေး Bonds ။ အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ခြင်း (သို့) အခြားမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမဆိုမဝယ်ပါ။ ၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်သူ၏အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကိုရရှိရန်ရှိနေသေးသော်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဟန်ဂေရီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ဟန်ဂေရီတွင်ကောင်းမွန်သောပညာရေးစနစ်ရှိပြီးလူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်သည်။ တိုင်းပြည်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုနှုန်းနည်းသောလုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟန်ဂေရီရှိအိမ်ခြံမြေသည်အလွန်နိမ့်သည်။ နိုင်ငံတွင်အကျိုးအမြတ်ရှိသောအခွန်စနစ်ရှိသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတဆင့်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုလအနည်းငယ်အတွင်းရရှိနိုင်သည်။
ဟန်ဂေရီ၏နေထိုင်ခွင့်ကိုအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပေးလိမ့်မည်။ ရိုးရှင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းလမ်းမှာတိုက်ခန်းနှစ်ခန်းဝယ်ပြီးအမြတ်အစွန်းအတွက်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ခန်းများကိုငှားရမ်းမည့်ဟန်ဂေရီတွင် LLC ကိုသင်စတင်တည်ထောင်ခြင်းမှစတင်မည်။ မည်သည့်တိုက်ခန်းကိုသင် ၀ ယ်ယူလိုကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်၊ ဤအဆင့်များပြီးနောက်သင်နေထိုင်ခွင့်သည် ၂ လမှ ၃ လအထိရရှိလိမ့်မည်။ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုသုံးနှစ်သက်တမ်းတိုးသင့်ပြီး၊ ထိုကာလပြီးနောက်သင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။
အနည်းဆုံးလိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာယူရို ၂၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤပမာဏသည်တိုက်ခန်းနှစ်ခန်းဝယ်နိုင်ရုံသာမကအိမ်ခြံမြေစျေးကွက်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်သင့်အားအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိစေလိမ့်မည်။ ယူရို ၂၀၀၀၀ ထပ်ဆောင်းအစီအစဉ်အတွက်လိုအပ်သည်။ သင်တိုက်ခန်းများကို ၀ ယ်သည့်အချိန်တွင်အိမ်ခြံမြေအခွန် ၄% ရှိလိမ့်မည်။
ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဟန်ဂေရီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဟန်ဂေရီအဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်ဟန်ဂေရီရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဟန်ဂေရီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဟန်ဂေရီမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ဟန်ဂေရီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟန်ဂေရီမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဟန်ဂေရီတွင်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဟန်ဂေရီအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊
ဟန်ဂေရီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်မှဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
ဟန်ဂေရီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဟန်ဂေရီမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဟန်ဂေရီတွင်နိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဟန်ဂေရီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဟန်ဂေရီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဟန်ဂေရီမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟန်ဂေရီရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်သူတို့နေထိုင်သော Residency အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုသည့်အမြင်ကိုရှုမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဟန်ဂေရီရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်သူများနှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးဟန်ဂေရီရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဟန်ဂေရီ Residency
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဟန်ဂေရီသို့မဟုတ်ဟန်ဂေရီသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဟန်ဂေရီ၏ Residence Permit ရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံရန် Diligence ကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာတင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုပုံစံအတွက်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးပါကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
Duration:2ရက်သတ္တပတ်
သင်၏ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင့်အားမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဟန်ဂေရီမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဟန်ဂေရီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဟန်ဂေရီမှလက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဟန်ဂေရီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ဟန်ဂေရီတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ဟန်ဂေရီတွင်သို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဟန်ဂေရီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဟန်ဂေရီတွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဟန်ဂေရီအဘို့ ဟန်ဂေရီရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဟန်ဂေရီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဟန်ဂေရီရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ဟန်ဂေရီတွင်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ဟန်ဂေရီတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ကိုင်နေသောဟန်ဂေရီနိုင်ငံသားများအတွက်အကူအညီကိုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဟန်ဂေရီအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဟန်ဂေရီအဘို့ ဟန်ဂေရီရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဟန်ဂေရီ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဟန်ဂေရီအတွက်ရှေ့ရပျ ဟန်ဂေရီရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဟန်ဂေရီနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းဟန်ဂေရီရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဟန်ဂေရီ၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များကြောင့်နိုင်ငံတကာ Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဟန်ဂေရီအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင် Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များကိုထောက်ပံ့မှုပေးသောဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ဟန်ဂေရီအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏နေထိုင်မှုဟန်ဂေရီအတွက်နေထိုင်မှုမတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဟန်ဂေရီကိုစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပံ့ပိုးမှုအတွက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးဟန်ဂေရီအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်တွက်လျှင်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ ဟန်ဂေရီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဟန်ဂေရီအဘို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဟန်ဂေရီတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဟန်ဂေရီအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ ဟန်ဂေရီတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency မှလွဲ၍ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှကျွန်ုပ်တို့သည်ဟန်ဂေရီတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဟန်ဂေရီအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့အားဟန်ဂေရီနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟန်ဂေရီနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ဟန်ဂေရီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဟန်ဂေရီမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဟန်ဂေရီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဟန်ဂေရီကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချသူမည်သူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဟန်ဂေရီအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် ဟန်ဂေရီရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဟန်ဂေရီအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဟန်ဂေရီမှရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် ဟန်ဂေရီယန်ကိုသင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင် ဟန်ဂေရီရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ဟန်ဂေရီအတွက်လက်ငင်းစတင်ဘို့။
ဟန်ဂေရီရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဟန်ဂေရီအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဟန်ဂေရီတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဟန်ဂေရီအတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဟန်ဂေရီအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဟန်ဂေရီများအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, ဟန်ဂေရီအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဟန်ဂေရီရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ပြုပြီးနောက် အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဟန်ဂေရီ.
ဟန်ဂေရီတွင် Web ဒီဇိုင်း
ဟန်ဂေရီတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဟန်ဂေရီတွင် blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဟန်ဂေရီတွင် App Development
ဟန်ဂေရီအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်နေထိုင်မှုကိုဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဟန်ဂေရီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဟန်ဂေရီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဟန်ဂေရီတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဟန်ဂေရီတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းရှိသည်။
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ဟန်ဂေရီအတွက်ရှေ့နေလိုအပ်သည်။ သင်သည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဟန်ဂေရီသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားတရား ၀ င်ခွင့်ပြုချက်ကိုတရား ၀ င်တရားဝင်ဖြစ်သင့်ပြီးဟန်ဂေရီပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်ပယ်နယ်လ်သို့မဟုတ်ဟန်ဂေရီကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဟန်ဂေရီ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဟန်ဂေရီ၏နေထိုင်ခြင်းကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှကူညီခြင်းဖြင့်ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခြင်း၊ ဟန်ဂေရီမှာ။
ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဟန်ဂေရီ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့်ဟန်ဂေရီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ ဟန်ဂေရီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဟန်ဂေရီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေချုပ် တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးဟန်ဂေရီအတွက် စျေးသက်သာတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဟန်ဂေရီယန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဟန်ဂေရီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည်။ ဟန်ဂေရီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဟန်ဂေရီတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဟန်ဂေရီအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဟန်ဂေရီတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဟန်ဂေရီရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှဖြစ်သည်။
ဟန်ဂေရီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဟန်ဂေရီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်ကိုဆိုလိုသည်။ ဟန်ဂေရီတွင်ရွှေဗီဇာလျှောက်ခြင်း၊ ဟန်ဂေရီအတွက်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။ ဟန်ဂေရီအတွက်ရွှေဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟန်ဂေရီတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဟန်ဂေရီမှအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဟန်ဂေရီအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဟန်ဂေရီရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဟန်ဂေရီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ဟန်ဂေရီအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဟန်ဂေရီရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဟန်ဂေရီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဟန်ဂေရီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဟန်ဂေရီအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ဟုတ်ပါတယ်, ဟန်ဂေရီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ဟန်ဂေရီရှိအေးဂျင့်များသည်ဟန်ဂေရီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
Residency သည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency ၏ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်သည်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency အတွက်ဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိုင်ပင်ကြေးကိုသာပေးပြီး၊ Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်ကအာရှမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ နီပေါမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှဟန်ဂေရီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ယူအေအီးကနေဟန်ဂေရီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဟန်ဂေရီအဘို့
ဟန်ဂေရီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
အမျိုးသား Szechenyi စာကြည့်တိုက်
Budapest အတွက်ပြပွဲMAV ရထားလမ်းဆက်သွယ်မှုဟန်ဂေရီ
ဟနျဂရေီ CentralStatistical ရုံး
အီးယူ - ဟန်ဂေရီ
link ကိုမှ ဟန်ဂေရီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ဟန်ဂေရီမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်